Farqiga u dhexeeya magma iyo lava: sifooyinka iyo muhiimadda | Shabakadda Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 22/06/2022 10:00 | Geology
Maadaama ay jiraan tiro badan oo foolkaanooyin firfircoon ah oo adduunka ah, waxay aad ugu badan tahay in mid iyaga ka mid ah uu weli qarxo. Qaraxyada foolkaanaha qaarkood ayaa inta badan si fiican loogu yaqaan xoojinta ama saameyntooda, halka kuwa kalena laga yaabo in la ilduufo. Waxay ku jirtaa kuwa aadka loo aqoonsaday ama la sheegay foolkaanaha halka qaladka lagu tilmaamay magma iyo lava sida wax la mid ah had iyo jeer waa la sameeyaa, inkastoo aysan ahayn. Way badan yihiin farqiga u dhexeeya magma iyo lava oo aan si faahfaahsan u arki doono.
Sababtaas awgeed, waxaanu maqaalkan u hibeeyay inaanu kuu sheegno waxa ugu weyn ee ay ku kala duwan yihiin magma iyo lafaha iyo sifooyinkooda ugu muhiimsan.
1 waa maxay magma
2 waa maxay lava
3 Waa maxay farqiga u dhexeeya magma iyo lava
4 Qeybaha Fulkaanaha
4.3 Koorta Fulkaanaha
4.5 Chimneys iyo digsiyada
waa maxay magma
Aan ku bilowno maqaalkan inagoo fahamsan waxa magma tahay. Magma waxaa si fudud loogu qeexay dhagaxa dhalaalay ee ka yimid bartamaha dhulka. Natiijadu tahay isku-dhafka, magma waa isku-dar ah walxo dareere ah, xeryahooda kacsan iyo qaybo adag.
Halabuurka magma lafteedu way adag tahay in la qeexo sababtoo ah waxay ku xidhan tahay arrimo ay ka mid yihiin heerkulka, cadaadiska, macdanta, iwm, laakiin guud ahaan, waxaan kala saari karnaa laba nooc oo magma ah oo ku saleysan halabuurka macdanta. Bal aan eegno halkan:
magma badan: Waxay ka kooban tahay qayb silicates ah, oo ah qaab silicates hodan ku ah birta iyo magnesium, guud ahaan waxaa abuuray dhalaalidda qolof qaro weyn ee badda. Dhankeeda, nooca magma waxa sidoo kale loo yaqaan magma basal, kaas oo lagu garto in uu leeyahay muuqaal dareere ah sababtoo ah maadada silica oo yar. Xagga heerkulkeeda, badiyaa waa inta u dhaxaysa 900 ºC iyo 1.200ºC.
Magmas-gaaban: Marka la barbardhigo kuwii hore, waa magmas ay ku jiraan silica badan, oo ah qaab silicates oo hodan ku ah sodium iyo potassium. Caadi ahaan waxay asal ahaan ka soo jeedaan dhalaalidda qolofta qaaradda. Waxa kale oo loo yaqaan magma acidic iyo, sababtoo ah maadada silica sare leh, way dhegdheg yihiin oo si fiican uma qulqulaan. Dhanka heerkulka magma-ga felsigga ah, inta badan waa inta u dhaxaysa 650 ° C iyo 800 ° C.
Waxaa la arki karaa in labada nooc ee magma ay leeyihiin heerkul sare. Si kastaba ha ahaatee, marka magma qaboojiso, way dhalaalaysaa, abuurtaa dhagaxyo gubasho leh. Kuwani waxay noqon karaan laba nooc:
Plutonic ama dhagaxa soo dhex gala marka magma ay crystallizes gudaha Dhulka.
Folkaanaha ama dhagaxa buuxdhaafay Waxay samaysaa marka magma ay ka soo baxdo oogada dhulka.
Si kastaba ha ahaatee, magma-gu waxa ay ku hadhaysaa gudaha volcano dhisme loo yaqaan magma chamber, taas oo aan ka ahayn god dhulka hoostiisa ah oo kaydiya xaddi badan oo lafa ah waana meesha ugu qoto dheer ee foolkaanaha. Dhanka qoto dheer ee magma, way adagtahay in la sheego, ama xitaa la ogaado qolalka magma-dheer ee qoto dheer. Si kastaba ha ahaatee, Qolalka magma ayaa laga helay qoto dheer inta u dhaxaysa 1 iyo 10 kiiloomitir. Ugu dambeyntii, marka magma ay maamusho in ay ka soo baxdo qolka magma iyada oo loo marayo marinnada ama qiiqa Volcano, waxa loo yaqaan qarxinta foolkaanaha.
Ka dib markii aan wax badan ka barano magma, waxaan u gudbi karnaa ka doodista waxa lava yahay. Lava waa magma si fudud ku gaadha oogada dhulka marka ay foolkaanooyinku dilaacaan kana soo saaraan waxa aynu u naqaano qulqulka lafaha. Sida ugu dambeeya, lava waa waxa aan ku aragno qaraxyada foolkaanaha.
Sifooyinkeeda, iskudhafka lafaha iyo heerkulka lafaha labaduba waxay ku xiran yihiin gaar ahaan magma-ga, inkastoo heerkulka lavadu uu kala duwan yahay inta uu socdo safarka dhulka oo dhan. Khaasatan lafaha waxa ay la kulmaan laba arrimood oo aanay magma ahayn: Cadaadiska atmospheric oo masuul ka ah soo daynta dhammaan gaasaska ku jira magma-ga iyo heerkulka deegaanka oo sababa in lavadu si degdeg ah u qaboojiso oo ay soo saarto dhagaxyo.
Waa maxay farqiga u dhexeeya magma iyo lava
Haddii aad samaysay ilaa hadda, waxaa laga yaabaa inaad dareentay farqiga u dhexeeya magma iyo lava. Si kastaba ha ahaatee, halkan waxaan si kooban u soo koobi doonaa kala duwanaanshahooda ugu weyn si loo caddeeyo shakiyada suurtagalka ah. Markaa marka aad la yaabban tahay inay magma ama lava tahay, maskaxda ku hay waxyaabaha soo socda:
Goobta: Tani waxay u badan tahay inay tahay farqiga ugu weyn ee u dhexeeya magma iyo lava. Magma waa lava ka hooseysa oogada, lava waa magma kacda oo soo baxda oogada sare.
Soo bandhigida qodobbada: Gaar ahaan, lavadu waxay soo bandhigtaa arrimaha caadiga ah ee dusha dhulka, sida cadaadiska jawiga iyo heerkulka deegaanka. Taas bedelkeeda, magma ka hooseeya dusha sare ma saameeyaan arrimahan.
Sameynta Dhagax: Magma marka ay qaboojiso, si tartiib ah oo qoto dheer ayay u qaboojisaa, sidaas awgeed waxay abuurtaa dhagxaan plutonic ama soo dhexgal ah. Taas beddelkeeda, marka laafuhu qaboojiyo, si degdeg ah ayay u qaboojisaa oo korka, iyada oo samaysa dhagaxyo foolkaanooyin ah ama qulqulaya.
Waa kuwan qaybaha ka kooban qaabka foolkaanaha:
Waa furitaanka sare ee meesha lafaha, dambaska iyo dhammaan walxaha pyroclastic laga soo saaro. Marka aan ka hadalno walxaha pyroclastic, waxaan ula jeednaa dhammaan jajabyada dhagaxyada igneous volcano, crystals ee macdanta kala duwaniwm. Waxaa jira jeexjeexyo badan oo cabbir iyo qaabab kala duwan leh, laakiin kuwa ugu caansan waa wareegsan oo ballaaran. Folkaanaha qaarkood waxay leeyihiin wax ka badan hal bohol.
Qaybo ka mid ah foolkaanaha ayaa mas'uul ka ah qarxinta foolkaanaha ee xooggan. Waxay ka timaadaa qarxintaan kuwaas oo aan sidoo kale arki karno qaar ka mid ah qaraxyada foolkaanada oo ku filan inay burburiyaan qaybo ka mid ah dhismooyinkooda ama wax ka beddelaan.
Waa qayb ka mid ah foolkaanaha oo inta badan ku wareersan godka. Si kastaba ha ahaatee, marka foolkaanadu sii deyso ku dhawaad ​​dhammaan wax ka soo baxa qolka magma ee qarxinta, niyad jab weyn ayaa la sameeyay. Dalooladu waxay abuureen xoogaa xasillooni darro ah foolkaanooyin nool oo aan lahayn taageero qaabdhismeed. La'aanta qaab-dhismeed ka dhex jira foolkaanaha ayaa sababay in dhulku gudaha u dumo. Cabirka godkaani aad ayuu uga weyn yahay godka laftiisa. Xusuusnow in dhammaan foolkaanaha aysan lahayn caldera.
Waa lafaha urursan ee adkeeya marka ay qaboojiso. Dhammaan pyroclasts-ka ka baxsan volcanaha ee ay soo saaraan qaraxyada foolkaanaha ama qaraxyada waqti ka dib ayaa iyaguna qayb ka ah kolayga foolkaanaha. Sida laga soo xigtay Immisa finan oo noloshaada ah, dhumucda iyo xajmiga koollada way kala duwanaan karaan. Koonyada foolkaanaha ugu caansan waa scoria, splash, iyo tuff.
Waa jeexjeexyo ka dhaca aagga magma laga saarayo. Waa dildilaacyo ama dildilaacyo leh qaab dheer oo hawo siiya gudaha waxayna ka dhacaan meelaha magma iyo gaaska gudaha laga soo eryo dusha sare. Xaaladaha qaarkood waxay sababtaa in si qarax ah loogu sii daayo tuubooyinka ama qiiqa, halka xaaladaha kale waxa si nabad ah lagu sii daayaa dildilaaca jiho kasta ku faafaya oo dhul baaxad leh daboolaya.
Chimneys iyo digsiyada
Daloolooyinku waa tuubooyinka isku xidha qolka magma iyo godka. Waa halka uu foolkaanadu ka qaraxdo lafaha. Intaa waxaa dheer, gaasaska la sii daayo inta uu qaraxu socdo ayaa soo mara goobta. Hal dhinac oo ka mid ah qaraxyada foolkaanaha waa cadaadiska. Iyadoo la tixgelinayo cadaadiska iyo cadadka walxaha ka soo baxa qiiqa, Waxaan arki karnaa in dhagaxii la jeexjeexay cadaadiska oo laga saaray qiiqa.
Xagga digsiyada, waa samaysyo igneous ama magmatic ah oo leh qaabab tubular ah. Waxay sii maraan lakabyada dhagaxyada ku xiga ka dibna way adkeeyaan marka heerkulku hoos u dhaco. Dikadahaan waxaa la abuuraa marka magma ay kacdo jeexjeexyo cusub ama jeexjeexyo si ay ugu safraan waddooyinka dhagaxa. Ka gudub dhagaxyada sedimentary, metamorphic, iyo dhagxaanta plutonic ee jidka.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto faraqa ugu weyn ee u dhexeeya magma iyo lava.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » Farqiga u dhexeeya magma iyo lava